ရင်နှင့် အမျှ အပိုင်း (၁၀) – တိမ်တိုက်ထွန်း ရေးတဲ့စာ
Posted on May 7, 2019 by Tain Tike Htun
ရင်နှင့် အမျှ အပိုင်း (၁၀)
တကယ်တော့ ကိုယ်အရမ်းတတ်လို့၊ အရမ်းသိလို့ပြောပြနေတာမဟုတ်ပါဘူး။ မင်းသတိမထားမိတဲ့ သတင်းရေးနည်းတွေ၊ မင်းသိထားပြီးတဲ့ သတင််းရေးနည်းတွေကို အမှတ်ရအောင် ပြောပြနေတာပါ။ ဘာဖြစ်လို့ အဲဒီလို ပြောပြနေတာလဲဆိုတော့ မင်းကို တခြားလူတွေထက် သံယောဇဉ်ပိုမိလို့ပဲ။
ဗီယက်နာမ်မလေးနဲ့ စုံဖက်အကြောင်းပါဖို့များ ကိုယ့်စိတ်ကူးထဲမှာ လွှမ်းမိုးနေ သလား မသိပါဘူး။ ကိုယ်လေ… မင်းကို… ။ ဟာ… ကို်ယ် ဘာတွေပြောနေမိလဲ မသိတော့ ပါဘူး။ သတင်းအကြောင်းပဲ ပြောရအောင်…။
ဘယ်လိုပုံစံမျိုးပဲရေးရေး သတင်းစာဆရာကောင်းဆိုတာ ပရိတ်သတ်သိချင်တဲ့ အချက်် အလက်ကို lead မှာ တစ်ခါတည်းရေးသားနိုင်စွမ်းရှိရမယ်တဲ့။ ဆိုလိုချင်တာက တော့ ကျစ်ကျစ်လစ်လစ် ရေးသားနိုင်လေကောင်းလေပဲပေါ့။ အဲဒါ ဆရာတစ််ယောက် ပြောပြတာပါ။
ကဲဒီနေ့တော့ ရေးနည်းပုံစံ နှစ်မျိုးကိုလေ့လာရအောင်။ သိထားပြီးသား။ Feature နဲ့ Report တဲ့။ Feature ဆိုတာက အချိန်ကာလ တစ်ခုခုကို အသက်ဝင်အောင် ရေးတာပေါ လေ။ သက်ဝင်ခံစားမှုတွေ၊ နောက်ခံသတင််းအချက်အလက်တွေ၊ အတွေ့အကြုံတွေပါ ရမှာပေါ့လေ။ ဆရာရဲ့သင်ညွှန်းထဲမှာတော့ ဒီလိုဆိုထားတယ် ဟန်နီ။
Feature: Vivid article about life with all emotions, background information and people to experience life, which is relevant to the readers.
အတိုချုပ်ကတော့ အဲလောက်ပဲ။ နောက်တစ်ခုက report ၊ သူကတော့ မင်းသိတဲ့ အတိုင်းပါပဲ။ တစ်ယောက်ကတစ်ယောက်ကို အစီရင်ခံစာတင်သလိုမျိုးရေးတာပေါ့။ ဖြစ်စဉ် အလိုက် သတင်းရေးတာ ထက်ပိုတယ်။ အဲဒီတော့ Report: Clear Structured reporting what all actors and background information လို့ ဆိုတယ်။
ကိုယ့်အထင်ကတော့ မှုခင်းသတင်းစာတစ်ချို့တွေမှာပဲ အဲဒီ report ပုံစံတွေ့နိုင် မယ်။ ဟန်နီ… မင်းရဲ့စာတန်းအတွက် အထောက်အပံ့ သေးသေးလေးတစ််ခုအဖြစ် ဒီဟာ လေးတွေကို ပြောပြဖြစ်တာပါ။ Source ပေးတဲ့ သဘောပေါ့။ ကျန်တဲ့အချက်အလက် တွေကိုတော့ အင်တာနက်ထဲမှာရှာပေါ့။
News: report about all relevant news in short space from up to ten sentences.
ဒီနေ့ပြောမယ့် အကြောင်းက အဲဒီသတင်းဆိုတာပေါ့။ ကိုယ်တို့အများဆုံးရေးနေကျ ရေးသား နည်းပဲမဟုတ်လား။ လိုရင်းတိုရှင်းရေးတာပေါ့။ သူက ဆယ်ကြောင်းထက်မပိုဘူး။ ကိုယ်သတင်းရေးရင် ခုနစ်ကြောင်းပဲရှိတယ်။ သတင််းထောက်တိုင်းအားသန်တဲ့ ရေးနည်း ပုံစံပေါ့။
ကဲ… နောက်တစ်ခု။ သူက Document တဲ့။
အချက်အလက်အတိုင်း သတင်းစာထဲရေးသားထည့်သွင်းတာပေါ့။ အင်း… အနီးစပ် ဆုံးပြောရရင် သတင်းဓာတ်ပုံပဲ။ ဆရာရဲ့ ရှင်းလင်းချက်ထဲမှာတော့… Document: Publishing document as original source of information. Important to ask for copy and publishing rights (f.c. pictures) တို့ ရေးထားတယ်။
စာတမ်းရေးဖို့ ပြင်တော့နော်။ အခုကတည်းက စိတ်ကူးထားမှ တော်ရာကျမယ်။
စာနှစ်စောင်ဖတ်အပြီး ကျွန်တော်ပြုံးလိုက်မိသည်။ သူမကတော့ ကျွန်တော့်ကို စိုက် ကြည့်နေ၏။
“ငါ ပြောထားတဲ့အတိုင်းပဲလေ၊ ဘယ်သူက ဒီလိုမျိုး အလုပ်ရှုပ်ခံပြီး စာရေးပို့နေ တာလဲ၊ နင် ဘယ်လို ထင်လဲလို့”
အားကိုးသည့် မျက််လုံးအစုံကို မြင်နေရပါသည်။
“နင်ဘာလို့ ငါ့ကို ယုံပြီး ဒါကိုလာပြောရတာလဲ။ နင် သံသယဝင်တဲ့ လူတွေထဲမှာ ဘာလို့ ငါ့ကို မထည့်ထားတာလဲ”
“ဒါကတော့ ရှင်းပါတယ်၊ နင်မဟုတ်ဘူးဆိုတာ ငါအလိုလို သိနေလို့ပဲ၊ ဒီကိစ္စက သင်တန်းအစတုန်းက ဆရာစာမေးရာကစတာ၊ အဲဒီနေ့က ဆရာမေးတဲ့ မေးခွန်းကို ငါမဖြေ နိုင််ခဲ့ဘူး၊ နင့်ကို ဆက််မေးတော့ နင်လည်းမသိဘူးလို့ ဖြေတယ်လေ။ သိသိရက်နဲ့ မသိဘူး လို့တော့ နင်ဖြေမှာမဟုတ်ဘူး။ အဲဒါတစ််ချက်၊ နောက်တစ်ခုကတော့ နင်အဲဒီလိုမျိုးငါ့ကို စာပို့ပြီး လက်ချာပေးရလောက်အောင် မတော်ဘူးလို့ ထင်တယ််”
သူမ စကားအပြီး နည်းနည်းတော့ ကျွန်တော််တင်းသွားမိသည်။ အထင်သေးရက် လိုက်လေခြင်း။ အင်းလေ။ လူတစ်ယောက်ကို လေးစားအထင်ကြီးမှုထက် ခင်မင်ရင်းနှီးမှု ကိုပဲ ကျွန်တော်ကမြတ်နိုးတာပါ။
ကျွန်တော် မျက်နှာတစ်မျိုးဖြစ်သွားတာကို သူမရိပ််မိသွားသည်။
” အဲ စိတ််ဆိုးသွားပြီလား”
” စိတ်ထဲမှာတော့ နည်းနည်းခုသွားတယ််မှလား”
“Hoa ရယ်၊ ဒါလူ့သဘာဝပဲဟာ၊ လူအားလုံးနီးပါး ကိုယ့်ကိုမြှောက်ပြော ကောင်းတာ ပြောရင် ကြိုက်တတ်ကြပြီး မကောင်းတာပြောရင် မကြိုက်ကြဘူးလေ”
“တကယ်ကို ဆောရီးပါ သူငယ်ချင်းရယ်”
“ရပါတယ်ကွာ၊ ကဲ ငါတို့ သုံးသပ်ကြည့်ရအောင်၊ ဒီစာကို ရေးတဲ့သူဟာ ကွန်ပျူတာ နဲ့ရေးပြီး Print ထုတ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက် Laptop အပိုင်ရှိတဲ့သူဖြစ်ရမယ်။ သူဟာ စာသင်ခန်းထဲမှာ၊ ဒါမှမဟုတ် ညဖက် အခန်းထဲမှာ စာရေး၊ ကျောင်းရောက်တော့ Print ထုတ်ပြီး ဒလစ်ဗာရီပို့ရင်ပို့ ဒါမှမဟုတ် ဟိုတယ်က ဝန်ထမ်းတစ်ယောက်ယောက်နဲ့ပေါင်းပြီး ပေးခိုင်းလိုက်တာဖြစ်မှာ ပေါ့”
ကျွန်တော့် သုံးသပ်ချက််ကို သူမ ခေါင်းညိတ်လိုက်ပါသည်။
“နင် ပြောသလိုဆိုရင် IIMC ရောက််တော့ Print ထုတ်လို့ရတဲ့ အခန်းဘယ်မှာရှိလဲ စုံစမ်း၊ အခန်းထဲရောက်တဲ့အခါ ဘယ်သူတွေ Print လာထုတ်လဲ စုံစမ်းရင် သိနိုင်တာပေါ့”
“Laptop ဘယ်သူ့ဆီမှာရှိလဲ စစ်တမ်းကောက််၊ ဖြစ်နိုင်ချေကို တစ်ယောက်ချင်း သုံးသပ် ဒါပဲရှိတော့တယ်။ အဲဒါ အဆင်မပြေရင် နောက်တစ်နည်းစဉ်းစားမယ်”
“အင်း ငါတွေးထားတာရှိတယ်၊ ဘယ်သူဖြစ်နိုင်လဲ အရင်သုံးသပ််ကြရအောင်၊ ရော့ အတန်းထဲမှာ ယောက်ျားလေး ၊ မိန်းကလေး ဘယ်နှစ်ယောက်လည်းခွဲပေး”
သူမပေးသော ဘောလ်ပင်နဲ့ စာရွက်ကို ယူကာ လူတွက််ကြည့်လို်က်သည်။
အားလုံး (၂၄) ယောက်။
မြန်မာ (၆) ယောက် ကျား – ၄ မ – ၂
လာအို (၆) ယောက် ကျား – ၃ မ – ၃
ကမ္ဘောဒီးယား (၆) ယောက် ကျား – ၃ မ – ၃
ဗီယက်နာမ် (၆) ယောက် ကျား- ၂ မ – ၄
ကျား (၁၂) ယောက်၊ မ (၁၂) ယောက်ဖြစ်နေသည်။
“အဲဒီမှာ သံသယမဖြစ်တဲ့ လူတွေဖယ်ကြည့်ရအောင်”
သူမက မိန်းကလေးတွေ အားလုံးကို ပယ်မဲအဖြစ် X ခြစ်လိုက််လေသည်။ ဘာ ကြောင့်လဲ သဘောနဲ့ ကျွန်တော်က မျက််ခုံးပင့်ပြလိုက်၏။
“စာနံပါတ် (၃) မှာ ရေးထားတယ် တွေ့လားဒီမှာ”
“ဗီယက်နာမ် မလေးနဲ့ စုံဖက်အကြောင်းပါဖို့များ ကိုယ့်စိတ်ကူးထဲမှာ လွှမ်းမိုးနေသ လား မသိပါဘူး” ဟူသည့် စာတန်းကို ထောက်ပြလေသည်။
“သူ ငါ့ကို သဲလွန်စ ပေးလိုက်တာလား၊ တကယ်မသိဘဲ ရေးတာလား မပြော လောက်ဘူး၊ ပထမ နှစ်စောင််တုန်းက ဒီစာတွေပို့လိုက်တဲ့သူဟာ ယောက်ျားလေးလား၊ မိန်းကလေးလား သေချာမသဲကွဲဘူး၊ ထင်မြင်ယူဆချက်နဲ့သာ ယောက်ျားလေးလို့ ခန့်မှန်း ထားတာ၊ တတိယစာရောက်လာတော့မှ ယောကျ်ားလေးဆိုတာ သေချာသွားတယ်။ သူက ငါ့ကိုရည်းစားစကားလည်း ပြောချင်သေး တာကိုး၊ အဲဒီတော့ မိန်းကလေးတွေ အားလုံးကို ပယ်လိုက်တယ်။ နောက်တစ််ချက်က ဗီယက်နမ် မလေးနဲ့ စုံဖက်အကြောင်းပါဖို့လို့ဆိုထား တဲ့အတွက် သူက ဗီယက်နာမ်လူမျိုး မဟုတ်လို့ပေါ့၊ ငါတို့ လူမျိုးအချင်းချင်းဆိုရင် ဒီလို ပြောမှာ မဟုတ်ဘူး၊ အဲဒီတော့ ဗီယက်နာမ် နှစ်ယောက်ကို ဖယ်ပစ်လိုက်တယ်”
ဗီယက်နာမ် ကျား (၂) နေရာမှာ X ခြစ်လိုက််လေသည်။
” အင်း အဲဒါဆို (၁၀) ယောက်ပဲ ကျန်တော့တယ်”
” အဲဒီ ဆယ််ယောက်ထဲမှာ နင်ရယ်၊ Pao ရယ် ဖယ်လိုက်တော့ ရှစ်ယောက်ပဲ ကျန်မယ် နောင််နောင်”
“ငါကတော့ ဟုတ်ပါပြီ၊ Pao ကို ဘာလို့ဖယ်တာလဲ”
“ငါ စုံစမ်းကြည့်ပြီးပြီ၊ သူ့အပြောတွေအရ သိတာ၊ သူလိမ်တာလဲ ဖြစ်နိုင်တာပေါ့ လေ၊ ဒါပေမဲ့ စိတ်ထဲက သူမဟုတ်ဘူးလို့ တစ်ထစ်ချယုံထားတယ်။ Will power ကို နင် ယုံလား”
“Will Power ”
“ဒီလူမဟုတ်ပါဘူးဆိုတဲ့ စိတ်ကို မသိစိတ်ကပေးတဲ့ စိတ်စွမ်းအင်ပေါ့၊ Pao မဟုတ် ဘူးလို့ ငါသိနေတယ်”
ဒါ သူမ သက်သက် မျက်စိမှိတ်ယုံတာပဲလို့ ကျွန်တော်ထင်သည်။
“ထားပါလေ၊ ကျန်တဲ့ ရှစ်ယောက်ကို အရင်စုံစမ်းလိုက်မယ်၊ သူတို့မဟုတ်တာ သေ ချာပြီဆိုမှ နင််နဲ့ pao ဖက်ပြန်လှည့်မယ်၊ အိုကေ… ဒါပေမယ့် ဒီကြားထဲမှာတော့ ဘယ်သူ လဲဆိုတာသိရဖို့ ငါ့ကို ကူညီပါဦးနော်”
“အင်းပါ၊ ဒါနဲ့ ဘယ်ကစရမလဲ”
“နင်ပြောတဲ့အတိုင်းလုပ်ကြည့်လေ။ Laptop ဘယ်သူ့အပိုင်ရှိလဲ အရင်ကြည့်မယ် ရှစ်ယောက်ထဲကလေ၊ ဒါပေမဲ့နော်… စာရိုက်တာက ငှားရိုက်လို့လဲ ဖြစ်တာပဲဟာ”
“တစ်ရက်တည်းရိုက််တာမှ မဟုတ်တာ နေ့တိုင်ငှားပါ ့မလား”
“ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ အဲဒီရှစ်ယောက်ကို အနီးကပ် အရင်ဆုံးပေါင်းကြည့်ကြတာပေါ့”
အနီးကပ်ပေါင်းပြီး တစ်ဖြည်းဖြည်းချင်း သတင်းတွေနှိုက်ယူရမည်။ အချိန်တိုအတွင်း လုပ်ရမှာမို့ လွယ်တော့မလွယ်ပါ။ ဒါပေမဲ့ သူမကတော့ စိတ်အားထက်သန်နေလေသည်။ ဘာကြောင့်လဲ ?
“နင်… ဘယ်သူလဲဆိုတာ အတိအကျသိရင် ဘာလုပ်မလဲ”
ကျွန်တော့်မေးခွန်းကို သူမ မဖြေပါ။
“ကဲ…ဟုတ်ပြီလေ၊ မပြောချင်ရင်လည်း အတင်းမမေးတော့ပါဘူး၊ မနက်ဖြန် ကစပြီး တစ်ယောက်ချင်းစီကို ချဉ်းကပ်ရမယ်။ သူတို့တွေနဲ့ စကားပြောကြည့်ပြီး ဒီစာဘယ်သူပေး နိုင်လဲဆိုတာကို… ”
“ဟေး… Hoa… စာလာပြန်ပြီ”
ကျွန်တော်တို့ စကားပြောသောနေရာကို Hoa ၏ အခန်းဖော် Quynh ရောက်ရှိလာ လေသည်။ သူမနှင့်အတူ ပ ဉ္စမမြောက်စာပါလာ၏။ ကျွန်တော့်ကို အကဲခတ်ကြည့်လိုက်၏။
“ရတယ်၊ ငါ သူ့ကို ပြောပြထားပြီးပြီ”
သူမသည်် Quynh လက်ထဲက စာကိုယူကာဖွင့်ဖတ်လိုက်လေသည်။ ကျွန်တော်နှင့် Quynh လည်းသူမနှင့်် ခေါင်းချင်းဆုံကာ ဖတ်မိကြ၏။
ကိုယ်အကျွမ်းကျင်ဆုံး ရေးသားနည်းတစ်ခုပြောမယ်။ Interview လေ။ အင်တာဗျူး ကောင်းကောင်းတော့ ကိုယ်ရေးတတ်တယ်။ ဟန်နီလည်း ရေးတတ်မှာပါ။ အင်တာဗျူးရဲ့ အနက်အဓိပ္ပာယ်ကိုတော့ ဆရာက အခုလို သင်လိုက်တယ်။
Interview can be published as ‘Question & Answer’ article using the question in plain text. Ask for authorization before.
မင်းရော အင်တာဗျူး ဘယ်နှစ််ပုဒ်လုပ်ပြီးပြီလဲ။ ကိုယ်တော့ အင်တာဗျူးအလုပ် ကောင်းလို့ နယူးဒေလီကို မလာခင် နှစ်ပတ်လောက်မှာ ဆေးရုံတက်လိုက်ရတယ်။ ခြေသ လုံးကို သံဆူးတံခါးနဲ့ ခြစ်မိပြီးလေးချက်ချုပ်ရတာလေ။ ကိုယ်တို့နိုင််ငံမှာ နာမည်ကြီး အထင်ကရ ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးကို အင်တာဗျူးဖို့ တစ်ခြားသတင်းထောက်တွေနဲ့ အပြိုင်လိုက် တာ ချော်လဲတာလေ။ သံဆူးတံခါးက ဘောင်ခတ်မထားတော့ သံပန်းအစတွေနဲ့ ခြေသလုံး ခြစ်မိတာ တော်တော်နက်တယ်။ ဒါပေမဲ့ အဲဒီ ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ အနာကောင်းပြီးနောက်ပိုင်းမှာ အင်တာဗျူးကောင်းကောင်းလုပ်လိုက်ရတယ််။
အဲဒီ အင်တာဗျူးကလည်း အရမ်းနာမည်ကြီးသွားတယ်။ ကိုယ်လည်း Celebrity ဖြစ်သွားတာပေါ့။ အင်တာဗျူးကျေးဇူးလေ။
ကျွန်တော််နဲ့ Quynh က နားမလည်စွာ တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက်ကြည့်မိ၏။
“အထင်ကရ ပုဂ္ဂိုလ်ကို အင်တာဗျူးဖို့အသွားမှာ ချော်လဲဖူးတယ်လို့ ရေးထားတယ််”
“အဲဒါက ဒီကိုမလာခင် နှစ်ပတ်၊ လေးချက်ချုပ်ရတယ်၊ အဲဒီတော့ သူ့ဒဏ်ရာအမာ ရွတ်ရှိကိုရှိရမယ်။ ယောကျ်ားလေး ရှစ်ယောက်ရဲ့ ခြေသလုံးကိုလိုက်ကြည့် အမာရွတ်တွေ့ ရင် သူပဲ”
Hoa ပျော်နေပုံလေးကြည့်လို့ ကောင်းလိုက်တာ။
ကျွန်တော်ပါ ရောပျော်မိသည်။ တော်လိုက်တဲ့ ကောင်မလေး။
“အဲဒါလည်း အရမ်းမလွယ်ဘူးနော် Hoa”
Quynh စကားကို ကျွန်တော်ပါ ထောက်ခံလို်က်သည်။
“ဒါပေမယ် ့သေချာတဲ့ အချက်လေ။ စမ်းတဝါးဝါးမဖြစ်ဘူး”
ခြေသလုံးတွေကို အမာရွတ်ရှိမရှိ လိုက်ကြည့်ရမှာလွယ်တယ်များမှတ်နေသလား၊ အင်းလေ… သိပ်တော့ မခက်ဘူးပေါ့။
“ဟုတ်ပြီ အခုချိန်က စလို့ရပြီ”
ကျွန်တော်ပြောလိုက်တော့ သူမတို့နှစ်ယောက်လုံးက ဘာလဲဆိုတဲ့အကြည့်နဲ့ ကြည့် လိုက်၏။ ပြီးတော့ ဘယ်သူ့ကို စမလဲမေးသည်။
“ငါ့ အခန်းဖော် ညီညီ”
Previous PostPrevious ရင်နှင့် အမျှ အပိုင်း (၉)
Next PostNext ရင်နှင့် အမျှ အပိုင်း (၁၁)